galmudugnews.com » Hoggaamiye kooxeedyadii ay Maxkamadda sare amartay in Baarlamaanka ay ka mid noqdaan oo weli uu muran ka taagan yahay
Home » WARARKA » Hoggaamiye kooxeedyadii ay Maxkamadda sare amartay in Baarlamaanka ay ka mid noqdaan oo weli uu muran ka taagan yahay Hoggaamiye kooxeedyadii ay Maxkamadda sare amartay in Baarlamaanka ay ka mid noqdaan oo weli uu muran ka taagan yahay galmudug on
No Comment Views 16284Waxaa goordhaw Buuq iyo Foodo kusoo dhamaaday Shirkii ay lahaayeen Baarlamaanka Soomaaliya kadib markii halkaasi ay ka qeyb galeen xubno la isku badalay kararna watay.
Sida aan wararka ku heleylo Foodada iyo Buuq ayaa timid kadib markii la isku qabsaday Xubno Baarlamaanka ay Maxmakada Sare Dalka u xukmisay in ay kamid noqdaan, kuwa oo qaarkood Gudiga Farsadamada ay iyagana kusoo badaleen Xubno kale oo Beeshooda ah siiyeena kaararka aqoonsiga.
Xaalada ayaan mar qura buuq iyo foodo isku badashay kadib markii Kulanka ay soo wada fariisteen Xubno la isku badalay nin walibana uu wato kaararka aqoonsiga taa oo dhalisay in aan labada dhinacbo aan la dharain dibna loo dhigo.
Waxaana inta aan Foodada bilaaban la dhaariyey 16-kamid ah mudanayaasha oo aan horay loo dhaarin waxaana buuqa keenay 4-kamid ah xubnahii maxkamadu go’aamisay kuwaasi oo horay boosaskoodii loo buuxiyey.
La Gudoomiyaha Gudiga Farsamada Xaliimo Yareey ayaa Gudoomiyaha Baarlamanaka u gudbisay ilaa afar qof ay sheegeen in ay ku badaleen Afar Hogaamiye ,hasa ahataee Gudoomiyaha ayaa ka diiday in uu ka gudoomo uuna dhaariyo halkaas ayaana Buuqa koowaad ka bilowday.
Kulanka ayaana noqday mid sii socon waayay oo foodo iyo Buuq isku badalay ,Xubnaha Baarlamaanka ayaana kulanka ku kala dareeray xili aan la fasixin oo Shir gudoonka uusan shirka soo xirin ,inakstoo markii ay foodada ay sii socotay Shir gudoonka ku dhawaaqay in kulanka uu xiran yahay.
Xildhibaano kulanka kusugnaa xiliga Foodadan socotay ayaa noo sheegay in Foodada ay kiciyeen Xubnaha Gudiga Farsamada oo Maanta hooshii ay hayeen ku wareejinayay Gudoonka Cusub ee Baarlamaanka kadib markii uu waqtigoodii dhamaaday.
Kulanka ayaana noqday mid markii Dambe kusoo dhamaada foodo iyo Buuq ,Xildhibaanada ayaana kulanka ku kala dareeray iyaga oo wali buuqsan aadna u hadal haya waxii meesha ka dhacay.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21016 hitsContact US - 19652 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15764 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15320 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13949 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13893 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13821 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13546 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11797 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11789 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11737 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11529 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11507 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11360 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11212 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11170 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11062 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11051 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10805 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10393 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10357 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10306 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10022 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 9990 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9786 hits Home About